Posted By: KongoLisolowaa: September 11, 2018 3: 09 1 Comment
Posted By: KongoLisolowaa: September 11, 2018 12: 00 No Comments
Posted By: KongoLisolowaa: July 24, 2018 6: 43 No Comments
Posted By: KongoLisolowaa: July 15, 2018 1: 40 No Comments
Maxaa daciifiyey farshaxanka uumarka? Waagii hore, is-xajiintu waxay ahayd iskuul ama farshaxan (maxaa ??) maxaa yeelay waqtigaas, habluhu si fudud ugama bixin; ka dib waxay jirkooda si fiican u dabooleen "Si xitaa loo arko bowdada gabadha, waa inaad lahaataa istiraatiijiyad wanaagsan"
Doorashada doorashada Kongo: kulanka u dhexeeya Nangaa iyo murashaxiinta madaxweynaha, laakiin maxaa Nangaa u abaabula shirarka degdegga sidan sidan ah?
Kubadda Dahabka: Sadio Mane ayaa qayladiisa ka soo bilaabay wadnaha. Sadio Mane, weerar yahanka caanka ah ee "Reds" (kooxda Liverpool ee England), miyaanay u qalmin inuu ku guuleysto Koobka Adduunka ee Dahabka Adduunka? Waa tan falcelinta Sadio Mane ka dib markii uu kubbada dahabka ka jabiyay chessboard-ka adduunka
Feb16 09: 29